160+ စာရေးဆရာနှင့်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှစမတ်ထားသောစကားစုများ။ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဒံယလေက | | စာပိုဒ်တိုများ
သမိုင်းမှာပြောခဲ့ကြတဲ့နာမည်ကြီးလူတွေရှိတယ် လိမ္မာပါးနပ်သောစာပိုဒ်တိုများ ဘဝ၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုး၊ သူတို့ထဲကတချို့ဟာကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်သည်နှင့်အသက်ရှင်ဆဲသို့မဟုတ်တစ်ခေတ်တည်းနေသောအခြားသူများ။ ယနေ့ Self-Help အရင်းအမြစ်များတွင်အကောင်းဆုံးသောသင်ခန်းစာအချို့ကိုသင်ယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည်သင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်သင်မျှဝေနိုင်သောပုံများနှင့်သင်ဖတ်ရှုရန်လိုအပ်သည့်သင်၏ဘဝတွင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခိုက်အတန့်များအတွက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအရာများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးကိုကြိုးစားခြင်းသည်မှန်ရာကိုပျက်စီးစေသည်။ - ဝီလျံရှိတ်စပီးယား။
အသိပညာသည်ပျော်ရွှင်မှု၏အဓိကအပိုင်းဖြစ်သည်။ ? ဆိုကရေးတီး
အောင်မြင်မှုသည်စုံလင်ခြင်း၊ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊ ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်းနှင့်ဇွဲရှိခြင်းမှသင်ယူခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ - Colin Powell ။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကိုဆောင်တတ်၏။ - မာသာ Beck ။
လူတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။ ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စိတ်ဝင်စားမှု။ - နပိုလီယံ Bonaparte ။
လူငယ်များသည်၎င်းကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းရှိမရှိမမေးမြန်းဘဲ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကန့်သတ်ချက်များကိုချမှတ်သည်။ ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ - Paulo Coelho ။
အနာဂတ်သည်မိသားစုအပေါ်တွင်မူတည်ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်း၏အနာဂတ်ကိုများစွာမူတည်သည်။ သူတို့၏အထူးအခန်းကဏ္roleမှာငြိမ်းချမ်းရေးအနာဂတ်အတွက်ထိရောက်စွာပံ့ပိုးရန်ဖြစ်သည်။ - John Paul II
စိတ်ခံစားမှုမရှိဘဲစီမံကိန်းမရှိပါ။ - အက်ဝါဒိုပွန်နက်။
သင်အပျက်သဘောဆောင်သောအခြေအနေကိုတွေ့သောအခါမစဉ်းစားပါနှင့်။ အပြုသဘောဆောင်ပါစေ။ - ယိုကိုအိုနို။
သူမ၏စစ်မှန်သောအသက်အရွယ်ကိုပြောပြသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားယုံကြည်မှုရှိရန်။ ဤအရာကိုပြောနိုင်စွမ်းရှိသောမိန်းမသည်အရာရာကိုပြောနိုင်သည်။ - အော်စကာဝိုင်း။
ဘဝမှာအောင်မြင်မှုမှန်သမျှအကောင်းမြင်မှုနဲ့စွဲချက်တင်ထားတဲ့ဒေါသဒေါသထွက်နေတဲ့ဇုန်ထဲဝင်ခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ - Sylvester Stallone ။
သင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ရှိသောအရာများကိုသင်၏ခေါင်းပေါ်တွင်မချထားပါနှင့်။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
ဘဝမှာမင်းမှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ မင်းအကောင်းမြင်ဒါမှမဟုတ်အဆိုးမြင်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငါအကောင်းမြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ - Jon Anderson
သူသည်သူ၏ဘဝကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ဆယ်မိနစ်သာကြာပြီးနာရီပေါင်းထောင်ချီ။ သူ့အားစဉ်းစားခဲ့သည်။ - Paulo Coelho
ဘုရားသခင်ကသေးငယ်လာပြီးသိပ္ပံပညာကပိုတိုးလာတယ်။ - အက်ဝါဒိုပွန်နက်။
ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာမသိနိုင်သောကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်ချက်မှာဤအရာသည်နှလုံးသားဖြင့်သာမြင်နိုင်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှာမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ - မင်းသားလေး။
သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် ပို၍ သဟဇာတဖြစ်ပါကသင်ပိုမိုပျော်မွေ့လေ၊ သင်၌ယုံကြည်လေလေဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းကသင့်ကိုအဖြစ်မှန်မှအဆက်မပြတ်စေပါ။ - Paulo Coelho
အမျိုးသမီးများသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ရန်၊ - အော်စကာဝိုင်း။
အမှန်တရားသည်မုသားနှင့်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှစ်ရပ်လုံးမှယိုယွင်းနေသည်။ - စီစီရို။
ပညာရှိတို့သည်ပညာကိုရှာ။ ၊ လူမိုက်သူတို့ကပြီးသားတွေ့ပြီထင်ပါတယ်။ - နပိုလီယံ Bonaparte ။
နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိပြီးနားလည်မှုလျော့နည်းလာသည်။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုအမှန်တကယ်မိသားစုမပေးဆပ်ပါကကလေးများအားစိတ်ကူးများအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းခြင်းသည်အဘယ်နည်း။ - အက်စ် Biffi ။
လေ့လာမှုကိုတာ ၀ န် ၀ တ္တရားအဖြစ်ဘယ်တော့မျှမစဉ်းစားပါနှင့်၊ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
အခြားသူများထံအပ်နှံထားသောဘဝသာ Albert Einstein ဖြစ်သည်။
ဝိညာဉ်၌မြေ၌ရှိသကဲ့သို့၎င်းသည်အနက်ရှိုင်းဆုံးအမြစ်များကိုအမြစ်တွယ်စေသောအလှဆုံးပန်းများမဟုတ်ပါ။ - CS Lewis ။
အကယ်၍ သေချာတာပေါ့။ သင်သံသယနှင့်စတင်ပါက၊ သို့သော်သင်သည်သံသယများဖြင့်စတင်ခြင်းကိုလက်ခံပါက၊ - ဆာ Francis Francis Bacon ။
စိတ်ဝိညာဉ်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ - အက်ဝါဒိုပွန်နက်။
ချွန်ထက်သောလျှာသည်အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုပြတ်သားစေပြီးဖြတ်တောက်သောတစ်ခုတည်းသောကိရိယာဖြစ်သည်။ - ဝါရှင်တန် Irving ။
ယောက်ျားလား။ လေသည်သူတို့ကိုလေကဲ့သို့သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည် ဖြစ်၍ သူတို့၌အမြစ်မရှိ၊ - မင်းသားလေး။
သင်ယဉ်ပါးအောင်လုပ်ခဲ့ခြင်းအတွက်သင်အမြဲတမ်းတာ ၀ န်ရှိသည်။ - မင်းသားလေး။
မိသားစု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တိုင်းပြည်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာသီလအားလုံး၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ - Funk - Brentano ။
ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်ဟုထင်လောက်အောင်ရူးသွပ်သူများသည်ထိုသူများဖြစ်ကြသည်။ - စတိဗ်ဂျော့ဘ်။
သင်၏စိတ်ကိုကျွေးမွေးရန်သင်အပြုသဘောဆောင်သည့်အတွေးများကများများစားစားဆွဲဆောင်နိုင်လေဖြစ်သည်။ —Roy T. Bennett
လူသည်မှန်ရာကိုရှာဖွေရမည်၊ - Johann Pestalozzi
သဲကန္တာရ၏လှပမှုသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရေတွင်းတစ်ခုကိုပုန်းအောင်းစေသည်။ - မင်းသားလေး။
ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်မိမိကိုယ်ကိုထက်အခြားသူများအတွက်ပိုမိုသာလွန်သည်ဟုခံစားရသောအခါရင့်ကျက်မှုစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ခြင်းသည်မျှော်လင့်ခြင်းတစ်ခုထက်မကပိုသည်။ - Archimedes ။
မိန်းမတစ်ယောက်တကယ်ပြောတာကိုမင်းသိချင်ရင်သူမကိုကြည့်ပါ၊ - အော်စကာဝိုင်း။
မိသားစုတွင်ကောင်းမွန်သူသည်နိုင်ငံသားကောင်းလည်းဖြစ်သည်။ - Sophocles ။
လူသားသည်သူ၏အကြံအစည်များသာဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင်ထင်သောအရာကိုဖြစ်လာသည်။ "ဂန္ဒီ။ "
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေ့တိုင်းအခက်ခဲဆုံးတိုက်ပွဲ။ - နပိုလီယံ Bonaparte ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကတစ်ခုခုကိုလိုချင်ရင်သူတို့ဟာစွန့်စားမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိရမယ်။ - Paulo Coelho
ကလေးများမွေးဖွားပြီးလူသေသည့်နေရာ၊ လွတ်လပ်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းထွန်းကားသည့်နေရာသည်ရုံးခန်း၊ ဆိုင်တစ်ဆိုင်၊ စက်ရုံမဟုတ်ပါ။ ငါမိသားစု၏အရေးပါမှုကိုတွေ့မြင်ဘယ်မှာရှိပါတယ်။ - Gilbert Keith Chesterton ။
ငါစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရေးတဲ့အခါ, ငါကကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အရေးလိုက်; တုံ့ပြန်မှုစာဖတ်သူကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ လူတွေကြိုက်တယ်၊ မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါကငါ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ - Paulo Coelho
ဥပမာတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်အခြားသူများကိုလွှမ်းမိုးရန်အဓိကနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ; အဲဒါတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပါ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်မှောင်မိုက်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အလင်း၌တစ်ယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းထက်ပိုကောင်းသည်။ - Hellen Keller ။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီကိုဂုဏ်သိက္ခာအတွက်၊ - နပိုလီယံ Bonaparte ။
မင်းရဲ့နှင်းဆီနဲ့မင်းအချိန်ကုန်ခဲ့ရတာကအရမ်းကိုအရေးကြီးတယ်။ - မင်းသားလေး။
ငြူစူခြင်းဟူသည်ညံ့ဖျင်းခြင်း၏ကြေငြာချက်ဖြစ်သည်။ - နပိုလီယံ Bonaparte ။
ယောက်ျားသည်မိသားစုတစ်ခုနှင့်သာအပြည့်အဝမခံစားရပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့၏လက္ခဏာကိုပေးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ - Dustin ဟော့ဖ်မန်း။
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အမှန်တရားကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်လျှင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးကြော့ရှင်းစွာပြုလုပ်ပါ။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
ဘ ၀ သည်၎င်း၏အမှောင်နှင့်တောက်ပသောဘေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မူတည်သည်။ - ရှမွေလသည်အပြုံးများ။
အတွေ့အကြုံသည်ကျင့် ၀ တ်မှုတန်ဖိုးမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှားများကိုပေးသောနာမည်သာဖြစ်သည်။ - အော်စကာဝိုင်း။
မျက်စိကသူတို့တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောအရာကိုတွေ့သောအခါနှလုံးသည်မည်သည့်အခါကမျှခံစားခဲ့ရသည့်ခံစားမှုကိုခံစားရသည်။ - အမည်မသိ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမွေးကင်းစကလေးများနှင့်တူသည်။ - အက်ဝါဒိုပွန်နက်။
အဆိုးမြင်: အရာအားလုံး၏စျေးနှုန်းနှင့်ဘာမျှ၏တန်ဖိုးကိုသိသူတစ် ဦး သည်။ - အော်စကာဝိုင်း။
ပျော်ရွှင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ - ဂျိမ်းစ်အမ်ဘာရီ။
မင်းသားလေးကမင်းရဲ့ကမ္ဘာဂြိုလ်သားတွေကဥယျာဉ်ထဲမှာနှင်းဆီ ၅၀၀၀ ပေါက်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရှာနေတာကိုရှာမတွေ့ဘူး။ - မင်းသားလေး။
လောကသည်ဆိုးသွမ်းသူများမဟုတ်ဘဲမကောင်းမှုကိုခွင့်ပြုသူများ၏အန္တရာယ်နှင့်မကင်းပါ။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
အောင်မြင်မှုသည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သော့ချက်မဟုတ်ပါ ပျော်ရွှင်မှုသည်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်သောအရာကိုချစ်မြတ်နိုးပါကသင်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ - အဲလ်ဘတ် Schweitzer ။
မကောင်းတဲ့အချိန်မှာ, ကောင်းသောမျက်နှာ။ - သုတ္တံ့။
နက်နဲသောအရာတခုသည်အထင်ကြီးလောက်သောအခါမနာခံရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ - မင်းသားလေး။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှု၏ဆယ်ပုံတစ်ပုံသည်ကျန်းမာရေးပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ? အာသာ Schopenhauer ။
နေရာလွဲနေသည့်စကားလုံးသည်လှပသောအတွေးကိုပျက်စီးစေသည်။ - ဗော်တဲယား။
ကျွန်ုပ်၏အကောင်းမြင်မှုသည်အကောင်းမြင်မှုအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ - Jean Cocteau
လိင်သည်မှတ်ဉာဏ်ကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုမသုံးပါကပျောက်သွားသည်။ - အက်ဝါဒိုပွန်နက်။
ပျော်ရွှင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်လောက၏အံ့ဖွယ်ရာများကိုတွေ့မြင်ရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်၏တာ ၀ န်နှင့်ပန်းတိုင်ကိုမမေ့ဘဲ။ ? Paulo Coelho
ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်မည်သူဖြစ်ကြောင်းသိလေလေ၊ ပြproblemsနာနည်းလေလေဖြစ်သည်။ - လင်း Grabhorn ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်မိန်းမအားမချစ်သရွေ့မည်သည့်မိန်းမနှင့်မဆိုပျော်ရွှင်နိုင်သည်။ - အော်စကာဝိုင်း။
စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာထိုအရာထဲသို့ကျသွားခြင်းဖြစ်သည်။ - အော်စကာဝိုင်း။
မျက်ရည်ကျတဲ့နိုင်ငံကဒီလောက်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည် - မင်းသားလေး။
ဘဝကအရမ်းအန္တရာယ်များတယ် မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူကြောက်ဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ်။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
အဆုံးမဲ့အရာနှစ်ခု - စကြ ၀ andာနှင့်လူသား၏မိုက်မဲမှု။ ပြီးတော့စကြဝtheာဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
အမှားတွေလုပ်မိတဲ့ဘဝကပိုပြီးဂုဏ်ယူစရာကောင်းရုံသာမကဘာမှမလုပ်တဲ့ဘ ၀ ထက်ပိုအသုံးဝင်သည်။ - ဂျော့ခ်ျဘာနာ Shaw ။
လူအားလုံးကိုနား ထောင်၍ အသံအနည်းငယ်ပေးသည်။ သူတစ်ပါး၏အပြစ်တင်သံကိုကြားရ၊ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ထားပါ။ - ဝီလျံရှိတ်စပီးယား။
တစ်ခါတစ်ရံမှာသင်ချစ်ရသူကိုထိခိုက်ရတယ်။ - CS Lewis ။
ပျော်ရွှင်မှုတံခါးတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့ကိုပိတ်လိုက်သောအခါအခြားတစ်ခုကဖွင့်လိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်မကြာခဏတံခါးပိတ်ကြည့်ပြီးတံခါးကိုမမြင်ရဘူး -Helen Keller ။
ဆွေမျိုးများအကြားမုန်းတီးမှုသည်အနက်ရှိုင်းဆုံးဖြစ်သည်။ - မပြောတတ်
အရာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ခုကိုသိတာထက်ဘာမှမသိတာပိုကောင်းတယ်။ - ပါစကယ်။
ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာကိုမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်တာကိုသင်ယူဖို့လိုတယ်။ - Paulo Coelho
မည်သူမဆိုသူတို့၏တိုင်းပြည်နှင့်လူသားတို့အားပေးအပ်နိုင်သည့်အကြီးမားဆုံးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာမိသားစုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ - Bernard Shaw ။
အကောင်းမြင်သဘောထားသည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သံလိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အပြုသဘောထားရှိပါကကောင်းသောအရာများနှင့်လူကောင်းများကိုသင့်ထံဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ - မာရိက Lou Retton ။
ဖြောင့်သောလမ်းဖြင့်လျှောက်သွားခြင်းသည်အလွန်ဝေးဝေးမသွားနိုင်ပါ။ - မင်းသားလေး။
ဘဝမှာမင်းဖြစ်ပျက်သမျှကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ သူတို့အားလုံးဟာအတွေ့အကြုံတွေပါ။ - ရွိုင်းတီ Bennett က
နှင်းဆီတွေအားလုံးကိုတစ်ယောက်ကမင်းကိုထိုးနှက်တာကိုပဲမုန်းတယ်။ သူတို့ထဲကတစ် ဦး မပြည့်စုံသောကြောင့်သင်၏အိပ်မက်အားလုံးကိုစွန့်လွှတ်လိုက်သည်။ - မင်းသားလေး။
တိတ်ဆိတ်သို့မဟုတ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုပြောပါသို့မဟုတ်ပြောပါ။ - Pythagoras ။
လျှာကိုနှစ်ကြိမ်ပိတ်ထားပြီးနားကိုနှစ်ကြိမ်ဖွင့်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နားထောင်ခြင်းဟာစကားပြောတာထက်နှစ်ဆပိုများရမယ် - Baltasar Gracian ။
ယုံကြည်ခြင်းသည်၎င်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နေ့စဉ်တိုက်ပွဲများလိုအပ်သောခက်ခဲသောအောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ - Paulo Coelho
စိတ်ဝိညာဉ်သည် ဦး နှောက်တွင်ရှိသည်။ - အက်ဝါဒိုပွန်နက်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိသူတစ်ပါး၏နှုတ်ခမ်းများ၌ရှိနေခြင်းထက် ပို၍ ဆိုးသည့်အရာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်မည်သူ့ကိုမျှမနှုတ်ခမ်းနှင့်မတူပါ။ - အော်စကာဝိုင်း။
မေးခွန်းများဘယ်တော့မှလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်ကြသည်။ အဖြေများတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှိသည်။ - အော်စကာဝိုင်း။
သင်ကွဲပြားသောရလဒ်များကိုလိုချင်ပါကထပ်တူမလုပ်ပါနှင့်။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
မိသားစုကိုဆန့်ကျင်သူတွေကသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဘာတွေဖျက်စီးနေတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ - Gilbert Keith Chesterton ။
ဘ ၀ ၌အောင်မြင်မှုကိုပျော်ရွှင်မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကြီးထွားမှုနှင့်ထိုက်တန်သောရည်မှန်းချက်များကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ? Deepak Chopra ။
သင့်တွင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြခွင့်ရှိသောမိသားစုတစ်ခုရှိပါကသင့်ဘဝသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ - Rosario Flores ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အဆိုးဆုံးရန်သူမှာလျစ်လျူရှုခြင်းမဟုတ်ဘဲမုန်းတီးမှုဖြစ်သည်။ - CS Lewis ။
ပြproblemsနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိသောသူများသည်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှောင်ရှားရမည်ကိုသိသောသူများထက်နည်းသည်။ - Luis SeñorGonzález
တခါတရံသင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်ကိုသင်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားသည်။ - CS Lewis ။
အမှားမကျူးလွန်သူသည်အခြားအရာတစ်ခုကိုတစ်ခါမှမစမ်းသပ်ဖူးပါ။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
အခြားထင်မြင်ချက်ရှိသူများကိုကြောက်ရွံ့ရန်မလိုအပ်ပါ။ အခြားထင်မြင်ချက်ရှိသော်လည်း၎င်းကိုဖော်ပြရန်သူရဲဘောကြောင်သူများဖြစ်သည်။ - နပိုလီယံ Bonaparte ။
လူ့သဘောသဘာဝကြီးမားသောအမှားသည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုကိုအမြဲတမ်းအစပြုပြီးအမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ? Julio Ramón Ribeyro
လူသားစားခြင်းနိဂုံးကိုငါကြိုမြင်တယ်။ ယောက်ျားသည်ထိုသူကိုရွံရှာသည်။ - Stanislaw Jerzy Lec ။
အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ဦး နှောက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း၏ရလဒ်မဟုတ်ဘဲစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ - အက်ဝါဒိုပွန်နက်။
မင်းရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်ရင်အကြီးမားဆုံးပျော်ရွှင်မှုကမိသားစုပျော်ရွှင်မှုပါပဲ။ - Joyce Brothers
သင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရန်ထက်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သည် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ကောင်းစွာဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းဟာစစ်မှန်တဲ့ပညာရှိတစ်ယောက်ပါ။ - မင်းသားလေး။
လူသည်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာကိုယုံကြည်ကောင်းပြုလိမ့်မည်၊ သို့သော်သူသည်မဖြစ်နိုင်ရာကိုမည်သည့်အခါမျှယုံကြည်မည်မဟုတ်ပါ။ - အော်စကာဝိုင်း။
ကျွန်ုပ်တွင်အထူးအရည်အချင်းများမရှိပါ၊ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာမနေထိုင်ဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာသွားပြီးရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တစ်ခုလုံးကိုတစ်ခဏအတွင်း၌သာအာရုံစူးစိုက်သည်။ - အော်စကာဝိုင်း။
ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုမည်သူမဆိုထက်သာ။ ကောင်း၏။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်း၊ - Paulo Coelho
ဒါဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ - မင်းသားလေး။
ယောက်ျားတို့သည်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နေရာသိပ်မယူကြပါ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်၎င်းတို့ကိုမယုံကြည်နိုင်ကြပါ။ - မင်းသားလေး။
ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်မသိဘဲဖြစ်ကြသည်။ ဖြစ်ပျက်လာတာကငါတို့အားလုံးကတူညီတဲ့အရာတွေကိုလျစ်လျူရှုတာမဟုတ်ဘူး။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
မီးနှင့်ကစားခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောအားသာချက်မှာသင်ကိုယ်တိုင်မမီးရှို့ရန်သင်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ - အော်စကာဝိုင်း။
ကမ္ဘာကြီးသည်ယနေ့ခေတ်တွင်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသဖြင့်တစ်ခုခုမလုပ်နိုင်ဟုပြောသောသူသည်၎င်းကိုလုပ်နေသူတစ် ဦး မှနှောင့်ယှက်ခံရသည်။ - အဲလ်ဘတ် Hubbard ။
စကားလုံးများသည်နားလည်မှုလွဲခြင်း၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ - မင်းသားလေး။
လူသားတစ် ဦး စီတွင်သူကိုယ်တိုင်၌သူ့ထက်ပိုအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ သူ၏လက်ဆောင်ဖြစ်သော Paulo Coelho
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အလိုဆန္ဒနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်ကြ၏ ချစ်သောစိတ်မရှိကြနှင့်။ - Miguel de Cervantes ။
မိုက်မဲသောသူတိုင်းကလိမ္မာပါးနပ်သည်။ - Georges Courteline ။
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအနိမ့်ဆုံးဘုံနေထိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုကအဲ့ဒါပဲ။ - အော်စကာဝိုင်း။
ငါလာ, ငါမြင်ငါအောင်နိုင်။ - ဂျူးလိယက်ဆီဇာ။
သင်ဘာမှမပေးနိူင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်ကနှလုံးကိုဆိုးဝါးစေတယ်။ - CS Lewis ။
ရည်မှန်းချက်သည်ကျရှုံးခြင်းမှနောက်ဆုံးခိုလှုံရာဖြစ်သည်။ - အော်စကာဝိုင်း။
Brute Force ကို ၀ န်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Brute အကြောင်းပြချက်ကတော့မခံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ - အော်စကာဝိုင်း။
မင်းကိုအဖွားကိုမရှင်းပြနိုင်ရင်တစ်ခုခုကိုသင်တကယ်နားမလည်ဘူး။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
သင်အသက်ကြီးလာသောအခါသင်လုပ်ခဲ့သည့်အရာကိုနောင်တမရပါ၊ - အမည်မသိ။
ငါကအကောင်းမြင်သမားလား၊ အကောင်းမြင်သူလားဟုမေးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဗဟုသုတသည်အဆိုးမြင်သည်ဟုဖြေသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒနှင့်မျှော်လင့်ချက်သည်အကောင်းမြင်သူများဖြစ်သည်။ - အဲလ်ဘတ် Schweitzer ။
ရိုးရာဓလေ့ကဘာလဲ? ၎င်းသည်တစ်နေ့တာကိုအခြားနေ့များနှင့်တစ်နာရီနှင့်တစ်ရက်ကွာခြားစေသည်။ - မင်းသားလေး။
ငါ့ကိုမေးခွန်းတွေအများကြီးမေးခဲ့တဲ့မင်းသားလေးကကျွန်တော့်ကိုမကြားဖူးဘူး။ - မင်းသားလေး။
ပျော်ရွှင်မှု၏အကြီးမားဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်မှာသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူနေခြင်းဖြစ်သည်။ ? Bernard le Bovier က de Fontenelle ။
သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်အရာရာကိုနားလည်နိုင်ရန်ဘယ်တော့မျှမတတ်နိုင်ပါ၊ ကလေးများအား၎င်းတို့အားထပ်ခါထပ်ခါရှင်းပြရခြင်းသည်အလွန်ပျင်းစရာကောင်းသည်။ - မင်းသားလေး။
သငျသညျဘဝတစျခုလုံးကို, သေး၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းကိုသာနားလည်ရပေမည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်စာဖတ်ရပေမည်၊ ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ရမည်၊ ထို့ကြောင့်သီချင်းဆိုရ၊ ကခုန်ရမည်၊ ကဗျာရေးရမည်၊ ခံစားရမည်၊ နားလည်ရမည်။ - Krishnamurti ။
မိသားစု? မိဘများသည်မိမိတို့၏စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာများကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေသောနေရာသည်ကလေးများ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်သည်။ - Enrique Salgado ။
အခွင့်အလမ်းမတည်ရှိပါဘူး; ဘုရားသခင်သည်အန်စာတုံးကိုမကစားပါ။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
မိုက်သောသူမူကား၊ ဝေးသောအရပ်၌ပျော်မွေ့တတ်၏။ ပညာရှိသောသူမူကား၊ - ဂျိမ်း Oppenheim ။
အကောင်းမြင်ဝါဒသည်အောင်မြင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးသတ္တိနှင့်စစ်မှန်သောတိုးတက်မှု၏အခြေခံလည်းဖြစ်သည်။ - က Nicholas အမ်ဘတ္။
အချစ်၏စွမ်းအားသည်အာဏာ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျော်လွှားသောအခါကမ္ဘာကြီးသည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသိလိမ့်မည်။ - Jimi Hendrix ။
မိသားစု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မိတ်ဆွေများ၏ကြည်ညိုလေးမြတ်မှုသည်စည်းစိမ်နှင့်အခွင့်အရေးထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ - ချားလ်စ် Kuralt ။
တ ဦး တည်းအမြဲချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဘယ်တော့မှလက်မထပ်သင့်ဘူး။ - အော်စကာဝိုင်း။
သင်သိလား? သင်တကယ်ဝမ်းနည်းနေစဉ်နေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ချင်သည်။ - မင်းသားလေး။
သူမသည်အခက်အခဲများကိုမကြောက်ခဲ့ပါ။ သူမကိုကြောက်လန့်စေသည့်အရာမှာလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ရန်တာဝန်ဖြစ်သည်။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အခြားသူများကိုစွန့်ပစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ - Paulo Coelho
ကြယ်များကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းကဘာလဲ။ - ကြွယ်ဝဖို့ကျွန်တော့်ကိုကူညီတယ်။ - ငွေရတတ်ခြင်းကဘာလဲ။ - ကြယ်များများ ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီသည်။ - မင်းသားလေး။
ပျော်ရွှင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်ကမ္ဘာကြီးကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအချက်ကိုရင်ဆိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ - Bertrand ရပ်စယ်လ်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးလူသားမှာသူတစ်ပါး၏ကောင်းမှုများကိုမည်သို့ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ကြောင်းနှင့်သူတစ်ပါး၏ကောင်းကျိုးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်သူဖြစ်သည်။ - Goethe ။
ဖိနှိပ်ခြင်းမခံလိုသူအများစုသည်ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုခံလိုကြသည်။ - နပိုလီယံ Bonaparte ။
အမုန်းတရားသည်ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်ပြproblemsနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ - မာယာအန်ဂျလို။
ငါပြanနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ချင်သောအခါငါကော်မတီတစ်ခုအပ်နှင်း။ - နပိုလီယံ Bonaparte ။
သင်လိုအပ်မှုနည်းလေသင်ပိုမိုချမ်းသာလေဖြစ်လိမ့်မည်။ - အမည်မသိ။
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်တိုက်ပွဲများသာနိုင်သည်။ - နပိုလီယံ Bonaparte ။
လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ချင်ပါသလား ကြီးစွာသောတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ - Pitaco
အတှေးအချေါမြားသညျသငျသညျဖျားနာမှုအားလုံးကိုကုစားနိုငျသောဆေးဆိုင်ဖွစျသငျ့သညျ။ - ဗော်တဲယား။
သင်ဘာလုပ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အားထက်သန်သောအခါသင်သည်အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ရှိသည်။ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် - Paulo Coelho
လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်တစ်ခါတစ်ရံပြစ်မှုကိုခွင့်လွှတ်သော်လည်းအိပ်မက်မက်သူအားဘယ်တော့မှခွင့်မလွှတ်ပါ။ - အော်စကာဝိုင်း။
အခြေအနေတိုင်းမှာပြုံးတတ်ဖို့သင်ယူပါ။ သင်၏စွမ်းအားနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်၎င်းကိုရှုမြင်ပါ။ - ဂျိုးဘရောင်း။
တက်သွားတဲ့အခါလူတွေကိုကြင်နာပါ။ သငျသညျဆင်းလာသောအခါသင်ကသူတို့ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ - အက်ဝါဒိုပွန်နက်။
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအနုမြူဗုံးရဲ့စွမ်းအားကိုတန်ပြန်နိုင်တဲ့လက်နက်တစ်ခုအကြောင်းမေးတဲ့အခါ၊ အကောင်းဆုံးကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း။
အထူးလျှော့စျေးရရန်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုပြုသူသည်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်ဖြစ်သော်လည်းမိတ်ဆွေမဟုတ်ပါ။ - Mario Sarmiento V.
ပျော်ရွှင်မှု၏စစ်မှန်သောလျှို့ဝှက်ချက်သည်သင်ကိုယ်တိုင်ထံမှများစွာတောင်းခံရန်နှင့်အခြားသူများထံမှအနည်းငယ်သာတောင်းဆိုရန်ဖြစ်သည်။ - အဲလ်ဘတ်ဂူနို။
ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းသည်လူသားတို့၏သဘာဝအရှိဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပြီးသင်ခိုင်မာသောပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။ - Benjamin Frankin ။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၏အသေချာဆုံးနည်းလမ်းမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ - နပိုလီယံ Bonaparte ။
အကယ်၍ သင်သည်ဤစမတ်စကားစုများကိုသူတို့၏ပုံများနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက (၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်) သင်၏လူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင်မျှဝေခြင်းဖြင့်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစကားစုဖြင့်မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားရန် (သို့) စာရင်းတွင်မပါ ၀ င်ရန်သင့်အားဖိတ်ကြားသည်။ ငါတို့ site ပေါ်တွင်ငါတို့ထုတ်ဝေထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားအချက်အလက်များကိုလည်းသင်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » 160+ အမျိုးမျိုးသောစာရေးဆရာများနှင့်အမျိုးအစားများမှတိုတောင်းသောစမတ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ